Filoha Rajao : Ny anjara tsa mba miolaka !
samedi, 22 avril 2017 20:07
Rehefa tsy mety ny atao, ny patsa iray aza hono tsy omby vava. Nohorakorahina izay tsy izy ny fandraisana ny fifanitsanana ny fiadiana ny amboaran’ny Afrika ho an’ny ekipam-pirenena amin’ny taranja rugby latsaky ny 20 taona etsy Mahamasina. Eo ambany fiahian’ny filoham-pirenena malagasy ny lalao ary dia tsy an-kiato ny dokam-barotra nentina nanindrahindra izany nandritra ny andro maromaro. Nisavoritaka ambony sy ambany ny televiziona nasionaly nampita mivantana ny lalao fa nanantena fahombiazana ho an’ny Maki de Madagascar ary indrindra koa laza tsara ho an’ny filoham-pirenena.
Indrisy anefa fa faharesena tamin’ny isa mavesatra tamin’ny isa 66 no 7 no azon’i Madagasikara. Faharesena sady maharary no mahamenatra. Diso kajy tanteraka ny fiadidiana ny Repobilika. Tamin’ny andron’ny Tetezamita mantsy no nahitan’ny Maki de Madagascar fahombiazana farany tamin’izany fiadiana ny amboaran’i Afrika tamin’ny taranja rugby izany ka nandresen’ny Malagasy farany ny Namibiana.
Tsy omena tsiny anefa ny mpilalao fa tratran’ny hery tsy mitovy. Naventy loatra ry zareo Namibiana. Etsy ankilany koa mipetraka ihany ny fanontaniana hoe mba inona no nataon’ny filoham-pirenena tamin’ireto ekipam-pirenena ireto nentina niatrika ny lalao sa dia saika hanantena hitaingina fandresena kanefa tsy hiasa tsy hitatatra akory ?
Na mitovy aza ny fifaninanana dia samy manana ny androny ny mpitondra. Ao ny efa voatendry ny hahita fandresena na mafy aza ny miandry azy ary ao kosa no tsy hahita afa tsy faharesena sy baraka na inona na inona ataony . Ny anjara tsy mba miolaka hoy ny Betsileo izay.
Ho fiarovana farany ny voninahim-pirenena dia hanao ny ainy tsy ho zavatra ny Maki rahampitso ny handresy ny Zimbaboeanina fara-faharatsiny mba mijanona ao amin’ny sokajy A izay misy azy ankehitriny i Madagasikara. Asa mba inona no ho ataon’ny ray mpiahy ?
car insurance comparison australia the general car insurance reviews
[url=http://autocarins2018.com/car-insurance-cost-comparison/]car insurance in new york[/url]
mardi, 12 décembre 2017 16:10
mardi, 12 décembre 2017 00:40
lundi, 11 décembre 2017 07:13
dimanche, 10 décembre 2017 10:13
samedi, 09 décembre 2017 16:54
samedi, 09 décembre 2017 02:38
samedi, 09 décembre 2017 02:32
vendredi, 08 décembre 2017 14:14
vendredi, 08 décembre 2017 12:53